Sawirro: Hal sawir kun erey ka wax sheeg badan! - Caasimada Online
Home Maqaalo Sawirro: Hal sawir kun erey ka wax sheeg badan!
Sawirro: Hal sawir kun erey ka wax sheeg badan!
Waa mid kale oo ka mid ah la taliyeyaasha sare ee Trump, wuxuuna aad u difaacay go’aanka madaxweynaha ee canshuuraha dheeraadka ah. Shirka kadib waxa uu CNN u sheegay in madaxweynaha iyo kooxdiisa ay shirka ku tageen niyad saafi ah, balse Trudeau uu “dhabarka mindi ka galiyay”.